Crunched: Sehatra fampisehoana izay manampy anao mivarotra | Martech Zone
Crunched: Sehatra fampisehoana izay manampy anao mivarotra
Alakamisy Oktobra Oktobra 4, 2012 Douglas Karr
Nopotehina dia sehatra fihaonana an-tserasera sy seho fampisehoana izay namboarina ho an'ny varotra. Ny fifaninanana mivantana amin'ireo olona toa ny WebEx sy GotoMeeting, Crunched dia nanatsotra ny fizotrany tamin'ny alàlan'ny fananana rafitra iray mifantoka amin'ny fivoriana, fanarahana sy fizarana ilay fisie, fampisehoana na ny efijeryo amin'ny alàlan'ny pejy web. Tsy misy rindrambaiko na iza na iza misintona sy manangana… mihaona fotsiny ary mandehana amin'ny URL fihaonana voatondro!
Crunched dia manolotra ireto fanalahidy manaraka ireto:
Meet - Atombohy ireo fihaonambe an-tranonkala tsy misy rindrambaiko mitono fanahy. Ny kaonty dia misy URL manokana sy laharana fihaonambe.
Connect - Manana fifandraisana manokana amin'ny mpanjifa. Ankoatry ny resaka chat dia azonao atao koa ny mijery ny piraofilin'ny mpiara-mianatra sy ny mombamomba anao.
Present - Tantano ary asehoy ny takelaka na zarao ny efijeryo. Ny ekipan'ny varotrao dia afaka mizara sy mirakitra ireo fampisehoana ihany koa!
lalana - Fampisehoana mailaka amin'ny alàlan'ny rohy azo zahana, jereo hoe iza no mamaky azy ireo ary mandra-pahoviana
miara-miasa - Mizarà famelabelarana, fivoriana, naoty ary mailaka amin'ny ekipanao mba hahafahan'ny tsirairay manampy amin'ny famitana ny fifanarahana
Ny ekipa mpivarotra dia afaka mizara famelabelarana ihany koa ary mandinika ny refy amin'ny mpiasa rehetra. Ity dia afaka manambara fampahalalana manokana momba ny mety ho fahasamihafana eo amin'ny fampisehoana ataon'ny olona ambony sy ny hafa amin'ny ekipan'ny varotrao.
Tags: rindrambaiko fihaonambecrunchedgotomeeting safidyrindrambaiko fivarotanawebex alternatera